I-china ibhodi yesekethe yebhodi yesekethe yokujika inkonzo ye-pcba yendibano yabenzi be-pcb kunye nabathengisi | PhiliFast
Ubungakanani bePCB: 72*132mm Isilikhi: mhlophe
Uluhlu Lolwaleko: 4/ L Cu Ukutyeba 35um (1oz)
Yafunyanwa ngo-2005. Kwiminyaka engaphezu kwama-10 yophuhliso oluqhubekayo, inkampani iye yazisa izixhobo imveliso phambili kakhulu, kwaye waseka iqela lobunjineli yobungcali, efunde amava amaninzi imveliso kunye nolawulo ngexesha lemveliso. Inkampani yethu inenkqubo epheleleyo yolawulo lomgangatho, iseti epheleleyo yenkqubo yokuhanjiswa kweenkonzo, kwaye iphumelele imveliso enkulu. Ikhava yabathengi bethu kurhwebo lwehlabathi, iimveliso eziphambili kunye neetekhnoloji zithunyelwa ngaphandle kwiimarike zaseYurophu naseMelika. Zonke iimveliso zithobela imigangatho ye-IPC kunye ne-UL.
IFILIMU inikeza zombini PCB kunye nemveliso ngobuninzi, ukuxhasa inkonzo UKUKHULULA. Ii-PCB zethu zigubungela i-1-32EzininziUluhlu lwe-PCB eqinileyo, siyakwazi ukwenza i-bоаrdѕ enzima, umz. I-PCB emininzi, i-PCB enzima, i-Rоgеrѕ kunye ne-Tеflоn PCB iibhodi ze-PCB, i-HDI bоаrdѕ, i-Aluminium-base PCB kunye ne-Flex-Rigid PCB, ukuphuma kwethu kwenyanga kuphelile 20000m2, zonke iimveliso zethu ziyahambelana ne-UL, CE, RoHS, ISO9001 ...
Ngaphandle kwe-IPCII esemgangathweni PCB ziqinile, Flexible, ziqinile-flex, ibhodi HDI, Thina kanjalo yandisa yethu Amandla ePCB ukuya IPCIII Standard I-PCB, eyamkelweyo ukuba yenziwe kwaye isetyenziselwe intsimi ye Ezomkhosi, ezeMoto, iMedical ,:
Ixhomekeke ku 32 Uluhlu I-PCB
IFILIMU Ukuvelisa Uluhlu oluninzi Ibhodi PCB ukuya 32 Uluhlus, isiseko izinto ibandakanya Fr4, Rogers, Arlon, Teflon, Taconic, Nelco, Isola, yodongwe, Metal core, ECT ..
Inkxaso ye-PHILIFAST ye-Express yenkonzo, i-PCB prototype inokwenziwa ngokukhawuleza ngaphakathi kwe-12hours. Inkxaso ezininzi inkqubo umphezulu: HASL-LF, ENIG, nesingxobo igolide, ukuntywiliselwa tin, emanzini, isilivere, ENIPIG, OSP.
1, Ukulungiselela iseti epheleleyo yeefayile zePCB (iGerber, iBOM, khetha kunye nokubeka iifayile), qiniseka ukuba zonke iifayile zicacile ngaphandle kwempazamo.
2, Thumela iifayile kwi-imeyile yethu: intengiso@fljpcb.com kwaye undixelele inani elithile ofuna ukuli-odola.
I-3, ukuthengisa kwethu kuya kuqhagamshelana nawe emva kweeyure eziyi-1 ukuqinisekisa zonke izinto zokucaphula.
4, Nje ukuba samkelwe isithembiso, siya kuthumela i-invoice ye-proforma kunye neenkcukacha zethu zeakhawunti yokuhlawula ukuze ujonge
5, Xa uqinisekisa i-PI, ungasithumela i-PO kwaye siya kuyisayina kunye netywina lenkampani yethu kwaye siyiskene kwakhona.
6, Hlela intlawulo kwaye usithumele isiliphu sentlawulo yebhanki.
7, Iqela lethu leenjineli liya kujongana neefayile zakho kwaye zikulungiselele iodolo yakho.
Egqithileyo ibhodi ye-pcb ekhokelwa ziibhodi zesekethe ze-aluminium kubenzi be-pcb
Okulandelayo: Pcb Multilayer Pcb Prototype Pcb Pcb Manufacter Custom Multilayer Prototype Assembly Electronics PCB Ukwenziwa
Shenzhen UMGANGATHO WOKUGQIBELA WESIFUNDA PC PC ...